Baolina lavalava - Fandraisana lalao • AoRaha
Baolina lavalava – Fandraisana lalao
Nampiteraka ahiahy ny Malagasy Rugby ny fikarakarana ny lalaon’ny Makis Madagasikara sy Namibia, izay tafiditra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina lavalava, amin’ny volana jona ho avy izao. Manahiran-tsaina azy ireo ny ho fifehezana ny fahamaroan’ny mpijery ho avy hanatrika an’io lalao io, raha ny tsapa nandritra ny fifaninanana “Gold Top 20”, tamin’ny volana janoary lasa teo. Feno hipoka hatramin’ny manodidina ny kianja Makis Andohatapenaka.
“Manahy sahady izahay. Dieny izao dia eo am-pandaminana tanteraka ny lafiny fikarakarana amin’io lalao handraisana an’i Namibia io ny Malagasy Rugby ho fisorohana ny sampona samihafa, satria vinavinaina tena ho tafahoatra ny isan’ny mpijery”, hoy ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomalala Marcel.
“Milaza mialoha sahady amin’ny fandaminana hentitra hapetraka izahay ary miangavy indrindra ny rehetra hahay hanaraka tsara ny toromarika apetraka amin’ny fiatrehana an’izany lalao amin’i Namibia izany”, hoy hatrany izy.
“Lasa vakoka ho an’ny olona mihitsy ny baolina lavalava fa tsy mijanona ho taranja ankafizin’ny Malagasy fotsiny intsony. Tafahoatra loatra ny fitiavan’ny Malagasy an’io taranja io”, hoy kosa Razily, mpanazatra ny Makis Madagasikara.